Abavelisi bebhendi yokuxhathisa -Iqela lase China le Resistance band kunye nababoneleli
Amabhendi oManyano oMbane oMelana nePeach hip isangqa
Ibhendi ye-Hip eyenziwe nge-polyester kunye ne-latex silk, ukuze sikwazi ukwenza ubungqongqo oqhelekileyo, ubukhulu obuqhelekileyo bubude be-S / M / L, S = 66cm ubude, M = 76cm ubude, L = 86cm ubude, Konke oku kubanzi kungama-80mm ububanzi. Ewe unokwenza amandla amanqanaba ahlukeneyo ukuba uyafuna.
2021 Best latex tube 11pcs 12pcs Resistance bands set body body exercise sets sets with cover safety fabric
Ibhendi nganye yahlukile ngemibala kunye namanqanaba okumelana: I-Yellow-10lbs, iBlue-15lbs, i-Red-20lbs, i-Green-25lbs, i-Black-30lbs, enobunzima bokumelana ne-75lbs. Unokuhlengahlengisa uxinzelelo lokufezekisa iinjongo zakho ngokusebenzisa ibhendi enye okanye ukudibanisa amaqela amaninzi, abagqibeleleyo kubaqalayo okanye iingcali, amadoda, abafazi, ulutsha okanye abantwana.
Ukuthengiswa okuShushu kweNgalo yoQiniso loQeqesho lwaMandla 8 yoBume bokuQinisa ukuQinisa iTyhubhu
Igama: I-8 yohlobo lwe-strecth band
Ubukhulu: 40 * 15cm
Umbala: Ipinki, Mfusa, Luhlaza, ngokwesiko
I-logo yangokwezifiso ze-TPE ye-yoga, ibhendi yokuxhathisa irabha, ulolonge umzimba weLatex yasimahla ye-theraband
Ithanga linokomelela okuhle, kwaye isebenza kakuhle ngokuhamba koqeqesho lweyoga ukufezekisa ubungqongqo obungcono. Kufanelekile kubantu abancinci nabasetyhini abanamandla aphantsi. Ingazolula ngokufanelekileyo kwaye isebenzise izihlunu zomzimba wonke, ukuzinzisa ukuma kunye nokulawula umgama wolwandiso, ukuphucula ukusebenza komzimba, kunye nokuma kwegophe elifanelekileyo lomzimba. Ngaba unokonyusa ulonwabo lomthambo kwaye utshintshe isitayile esinye sokuzilolonga.
Ukuhanjiswa kwefektri ngokuthe ngqo kumandla omzimba wokuxhathisa amandla ebhendi yomzimba I-latex inyusa ibhendi yokuncedisa
Okokuqala, le yimveliso yokomelela komzimba eco-friendly eyenziwe yi-100% ye-latex yendalo, Oku kuyenza yomelele kwaye igcineke ukuyisebenzisa.Ngethuba elifanayo, i-latex ivela eMalaysia, umgangatho uqinisekisiwe. Usuallty esetyenziselwa uqeqesho lwamandla okanye umthambo, ungayisebenzisa ejimini okanye ekhaya.
Umgangatho weMarble oMgangatho oQinisekisiweyo woQinisekiso lweBooty Band Ukuzivocavoca amaBhendi okumelana namaBhendi okumelana neebhendi zokuzilolonga
Umtya ophezulu welaphu kunye nokuprinta kwezilwanyana okumnandi- yakha amandla okhalipha kunye nokuqina ngezi zihlangu zokuprinta izilwanyana. Ibhanti ye-NQ ye-3-intshi (malunga ne-7.6 cm) ibhanti ye-hip inokubeka ngokulula isinqe, isinqe kunye nemilenze ukunceda ukutshintsha umzimba ongezantsi. Ngaphambi kokuzivocavoca umlenze, sebenzisa i-anti-skid hip band ukwenza i-hip isebenze, isebenzise ukwandisa amandla ngexesha lomlenze, okanye njengomthambo womlenze okanye umthambo womlenze emva kokuzivocavoca umlenze.
Ihowuliseyili iLatex 11 PCS Resistance Tube Band Iseti yezixhobo zeFektri yoQeqesho lweBhanti China Umthengisi
Ukuseta ityhubhu eseti kubandakanya iityhubhu ezi-5 zelatex, izibambo ezi-2, amaqatha amaqatha ama-2, ucango lomnyango kunye nengxowa yelaphu. Malunga neetyhubhu zelatex, sinombala obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, omthubi, omnyama, oluhlaza ukuze ube siseti, ezinye izincedisi zimnyama. Ngokwesiqhelo, Le mibhobho mihlanu inee-lbs ezahlukeneyo, zii-10lbs, 15lbs, 20lbs, 25lbs, 30lbs. Obu bubungakanani obuqhelekileyo, kodwa ayisiyiyo kuphela into onokukhetha kuyo, unokukhetha nayiphi na i-lbs ofuna ukuyibeka ngokudibeneyo.
Ijim yokuqina komzimba ilogo eprintiweyo yeYoga yokolula iBhendi yeLatex yokuzivocavoca iseti yebhanti yokuma kwebhendi
Kukhuselekile kwaye kuyomelela: Yenziwe nge-100% ye-latex yendalo, engenabungozi kunye nevumba yasimahla kunye nokunwebeka kunye nokuqina kwemisebenzi emininzi: Ukugqibelela komzimba, ukubumba umzimba, ukwehla kobunzima, uqeqesho lokuxhathisa, uqeqesho lwamandla, ukubuyela emva kokubeleka, ukulungiswa kwengozi kunye nokulula ngakumbi ukuSebenzisa: ukungaguquguquki kunye nokuqina kwawo nawuphi na umthambo ocela umngeni kuwo; tshintsha nje isikhundla sakho ujolise kwimisipha eyahlukeneyo ezingalweni, esifubeni, esiswini, egluteus, emilenzeni, ekubumbeni zonke iinkalo zomzimba wakho kunye nokwenza ngcono yonke imiba yempilo yakho
Ukuphakama kweGym yoQeqesho yoQeqeshiso lokuLolonga ukuThoba i-Elastic Tsala iiBhendi zokuNcedisa
1. Ibhendi yenziwe nge-100% ye-latex nge-elasticity ephezulu, eguquguqukayo kunye nemibala eqaqambileyo.
2. Ilungele uqeqesho lwamandla, uxinzelelo lwe-warp kunye nokuzilolonga kokuhamba.
3. Ukungenamthungo, akukho bubble, ukufana kombala, ukuguga, ukunganyangeki, kunye nokuguda ngaphandle kwemikrwelo.
I-Gym elasticity high logo isiko lokuzilolonga i-11pcs yokuxhathisa iibhendi zebhendi
I-NQ yeMidlalo yokuzivocavoca ye-latex ukumelana ne-loop band ebekelwe i-Gym yokuzilolonga
I-100% ye-latex yendalo, inezibonelelo zokuchukumisa ukubamba ngesandla kunye nomgangatho ophakamileyo, akukho lula ukuyaphula kunye nokukhuselwa kwendalo.Ngokwesiqhelo, ubude obuqhelekileyo buyi-50cm / 60cm, ububanzi obuqhelekileyo yi-50mm, obunye ubungakanani obufunayo ungenziwa ngokwezifiso. Sikwanolunye ukhetho lwebhanti encinci eyenziwe yimpahla ye-TPE ethathela ingqalelo ukungabikho komzimba kwabanye abantu. Zombini ezi zinto zibotshiweyo zinamandla aphezulu okuba sempilweni.
Umkhiqizi oQhelekileyo oQeqeshayo weSangqa seBhendi yesiqhelo eChina Umthengisi weBlue Pink Band